भगिरथीसँग अन्तिम पटक संगै हिंडेका यी दुई ब्याक्ति, उनले भनेकी रहेछिन यस्तो…
बैतडी – बैतडी दोगडाकेदार गाउँपालिका—७ बगौराका भानदेव भट्ट यसैपालि भागरथी पढ्ने विद्यालयमा कक्षा ११ मा भर्ना भएका हुन्। उनको घरबाट १५ मिनेट जति हिँडेपछि भागरथीकै घर हुँदै उनी विद्यालय पुग्छन्।
‘भागरथीले कतिबेला जाने हो ? भनेर सोधी। हामीले कपाल का’टेर आउँछौं भन्यौं। उसले ल त्यसो भए तिमीहरू आउँदै गर्नु, म जान्छु भनी र ऊ हिँडी
त्यो दिन सँगै आएको भए यस्तो घटना हुन्थेन कि ?’, उनले भने। यी सबैको घर आउने बाटो भनेको भागरथीको घटना भएको स्थान लवलेक वन हो
भानदेवलाई त्यसै दिनको पछुतो छ। ‘सायद त्यो दिन सँगै आएको भए यस्तो घटना हुन्थेन कि ?’, उनले भने। यी सबैको घर आउने बाटो भनेको भागरथीको घटना भएको स्थान लवलेक वन हो। लवलेक वन क्षेत्र सकिनेबित्तिकै फरकफरक गाउँ जाने बाटो आउँछन्।
तर भानदेव भने भागरथीको घर हुँदै आफ्नो घर जानुपथ्र्यो। भानदेवसहितका तीनै जनालाई भागरथीले चाउचाउ किनेको र भीरकट्याको डाँडोमा बसेर खाएको थाहा छैन। ‘हामी त, सैलुनमा छिरिहाल्यौं, त्यसपछि भागरथीका बारेमा केही थाहा भएन’, भानदेवले भने।
आफन्तलाई पनि त्यतिकै छ। आमा द्रोपती पछुताउँदै भन्छिन्, ‘त्यही दिनको ३, ४ बजेतिर लवलेक वनतिर खोज्न गएको भए सायद यस्तो हुन्थेन कि ?
त्यस दिनको पछुतो सहपाठीहरूलाई मात्रै होइन, आफन्तलाई पनि त्यतिकै छ। आमा द्रोपती पछुताउँदै भन्छिन्, ‘त्यही दिनको ३, ४ बजेतिर लवलेक वनतिर खोज्न गएको भए सायद यस्तो हुन्थेन कि ?’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा शिवराज भट्टले लेखेका छन् ।